Samsaung account ID Locked ဖြတ်နည်း (100%) done ... No ..box, No .. OTG.cable,NO ..bypass.Apk ~ MM Technology 1996
MM Technology 1996
Samsaung account ID Locked ဖြတ်နည်း (100%) done ... No ..box, No .. OTG.cable,NO ..bypass.Apk
Thet Htwe 12:19 AM Android, Mobile Knowledge, Samsung No comments
##..samsaung account မရှိပါက ဖွင့်ပါ။(using any mail)
##..internet connection (wifii) လိုသည်။
၁။samsaung account ID တောင်းသော page သို.ရောက်ပါက..back keyကို တစ်ချက်ခြင်း နှိပ်၍ Wekcome. Page သို့ ပြန်သွားပါ။
၂။first page သို့ရောက်ပါက Accessibility Setting ထဲသို့ဝင်ပါ။Accessibility ထဲမှ voice ထဲသို့ဝင်ပါ။ voice ထဲရှိအောက်ဆုံးမှ text to speech option ကိုနှိပ်ပါ။ ဒုတိယ စာကြောင်းကိုရွေးပါ။
၃။Google text ရှိ setting တွင်.install voice data ကိုရွေးပါ။
၄။Google TTS Voice data ဘေးရှိ option ကိုနှိပ်ပါ..View open sources lincenc ကိုနှိပ်ပါ။
၅။Notices for page ပေါ်လာလျှင်..phone screen ကို ဖိထား၍ကြိုက်ရာ စာကို copyလုပ်ပါ..အပေါ် ညာထောင့်ရှိ search ကိုနိပ်ပါ။
၆။Get google Now ပေါ်လာမည်။ အောက်တွင် ညာဘက်ရှိ tap ကို နှိပ်ပါ။justasecond. ပေါ်မည်။ Add your account တွင် gmail(သို့)ကြိုက်ရာ mail ထည့်ပါ..password. ထည့်ပါ..
၇။Google Service ကျလာမည် Next ကိုနှိပ်ပါ။Get Google Now ကျလာလျှင် အပေါ်ရှိ search box တွင် dog , car, စာလုံး ရိုက်၍ search ကိုနှိပ်ပါ။ Web page ကျလာလျှင် တစ်ခုခု ထဲသို့ ဝင်ပါ။ Chome နှင့် default browser. ပေါ်လျှင် default browser ကို ရွေးပါ..
၈။webpage ကျလာလျှင် browser ၏အပေါ်ညာဘက်ရှိ option ကိုနှိပ်ပါ။option ထဲရှိ setting ထဲသို့သွားပါ... Setting ထဲရှိ Manage Account ကို ရွေးပါ..OK ကို နှိပ်ပါ။အောက်ဆုံးမှစာကြောင်းကိုရွေးပါ..။
၉။Singin ကိုနှိပ်၍ samsaumg account ကိုထည့်ပါ..။ရက်စွဲတိုက်ပါ။ ဖြည့်သင့်သည်များဖြည့်ပါ။
အောက်ဆုံးရှိ check box တွင်အမှန်ခြစ်ဖြုတ်၍Next ကို နှိပ်ပါ။
၁၀။ i agreed to all ကို အမှန်ခြစ်ပါ .Next ကို နှိပ်ပါ။ Welcome ပေါ်လျှင် Comfim ကို နှိပ်ပါ..ခဏစောင့်ပါ။
၁၀။ အားလုံးပြီးပါက back key ဖြင့် တစ်ချက်ခြင်းနှိပ်၍ first page သို့ ပြန်သွားပါ။ တစ်ဆင့်ခြင်းပြန်ဝင်ပါ..samsaung account တောင်းသော page သို့ ရောက်လျှင် samsaung account username နှင့် password ကို ထည့်၍ Sing in လုပ်ပါ..Ok ကို နှိပ်ပါ... ခဏ စောင့်ပြီးရင် ရပါပြီ....
Download link ကို နှိပ်လိုက်ရင် Adf.ly ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။5second လောက်ကြာရင် ညာဘက် အပေါ် ထောင့်လေးမှာ အပေါ်ကပုံလို SKIP AD ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့ Button လေးကို တစ်ချက် ကလစ်လိုက်ပါ။ Download ဆွဲဖို့ Link လေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
Huawei Qualcomm Theme / Noti Bar Error Fixer ( One Click )
Huawei Qualcomm ဖုန်းတွေမှာ Board Firmware ရေးလို့ Noti Bar ပျောက်တာ Theme Change လို့မရတာတွေအတွက် 1 Click Fixer လေးပါ။ လိုအပ်သူမျာ...
Huawei Hol-U10 software brick Fix Firmware ( dead lcd fix logo stop )
SPD ဖုန်းများအား IMEI ပြန်ရေးရန် SPD IMEI Tool
Huawei G629-UL00 Flashtool Firmware ( Anti Thief Lock Fix, Display Fix )
Redmi Note 1S CU 4G Dual sim Fastboot rom Download
Xiaomi Note 1S Gucci ရဲ့ Rom Download Link ပါ။ အောက်က Link မှာရယူနိူင်ပါတယ်။ China Rom နဲ့ Global Rom နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်။ ...
ပထမဦးဆုံး လိုအပ်သော Software များကို Download ချထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ MauiMETA-3G V-7.1444.0.7z IMEI MauiMETA 3G လေးကို install ပြလု...
MTK Android Scatter File များစုစည်းမှု
Honor 3C H30-U10 Flashtool 2004 error fix
Service သမားများအတွက် Virus Removal Tool MK Killer
Service သမားများအတွက် Virus Removal Tool MK Killer application ပါ။ Android package အမျိုးပေါင်း ၁၀၀ကျော် ဖြတ်ထုတ်နိူင်ပါတယ်။ ...
Myphone M12 Flashtool Firmware
Password ခံထားသော Firmware များနှင့် Tool များသည် ရောင်းချခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09791307535 သို့မဟုတ် 09961867700 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Copyright © MM Technology 1996